About – 2trondro
2fish.co dia orinasa ny lehilahy sy ny vehivavy, anisan'izany vitsivitsy mpisorona Katolika, dedicated to defending and explaining the Catholic faith–indrindra fa ny Katolika finoana–amin'ny alalan'ny antony sy ny fahamarinana.
Tonga soa eto amin'ny rehetra dia hijery ny toerana sy namaky ny hafatra sy ny hevitra. Ianao koa mba hanaiky fanontaniana tonga soa ho an'ny “Mangataha ny mpisorona” pejy, na ny manaiky ho amin'ny toerana tena toriteny. Dia hamoaka valiny sy manaiky afa-po raha vao araka izay azo atao, fa isika kosa dia fikambanana an-tsitrapo, ary samy manana mpikambana (farafaharatsiny) iray manontolo andro asa.
Ho an'ny araka izay azo atao, ny hafatra dia ny miarahaba sy iraisam-pinoana, nefa tsy namadika ny foibe momba ny Finoana Katolika. Misy fitoviana kokoa noho ny fahasamihafana eo amin'ny kristianina isan-karazany sekta, ary raha isika mankalaza ireo fitoviana, isika koa Nahoana isika no mino ny zavatra ataontsika sy ny fomba fanao rehefa manao.
Manantena izahay ny hanao izany rehetra izany ao amin'ny mazava, tsotra anglisy.
Nisafidy ny anarana “2trondro” noho ny heviny ny roa sosona.
Voalohany, toy ny Fahagagana Ateraky ny (roa) Fish sy (dimy) Mofo izay hita ao tsirairay Filazantsara efatra, tiantsika hisy vokany eo amin'ny olona maro araka izay azo atao vitsy monja loharanon-karena. Noho izany, toy ny Springsteen Mihira, “Isika countin’ amin'ny fahagagana.”
Faharoa, ny alalan 'ny potoana (ho amin'ny araka izay azo atao), tsara, manavaka (ary, antenaina, aingam-panahy) hafatra, manantena ny hahazo trondro vitsivitsy, koa. Mifandraisa aminay Raha mila fanazavana fanampiny.